Ndị na-ebubata ngwaahịa na ụlọ ọrụ - ndị nrụpụta ụmụ nwoke China
Uwe akpụkpọ anụ atụrụ
Atụrụ atụrụ na Mittens
Igba akwa atụrụ
Iesmụ ọhụrụ mittens & akpụkpọ ụkwụ
Atụrụ atụrụ & Ohiri Isi
Ladies atụrụ akpụkpọ anụ uwe ...
Lambmụ nwoke atụrụ / akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ ejiri aka na-acha oji
Mere nke atụrụ Ethiopia akpụkpọ anụ, na ajị anụ, The kpochapụwo styling na kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ fọrọ nke nta ọ bụla oge, si ukporo ka uwe. Uwe ajị anụ ahụ na-atọ ụtọ ma na-ekpo ọkụ. Enwere ike idozi nsị gị na nha gị site na eriri akpụkpọ anụ na azụ.
Lambmụ nwoke na atụrụ / atụrụ akpụkpọ anụ ajị anụ ejiri aka na-atụgharị na bọtịnụ
Ejiri akpụkpọ anụ atụrụ nke Etiopia nwere akwa ajị anụ, iskpụrụ a na-ahụkarị nke a na-eme maka oge a na - emegharị ahụ. Ihe na-adị ire ụtọ, nke bara ọgaranya nke akpụkpọ anụ, ejiji kachasị na nka kachasị mma. zuru okè Nchikota! Ọbụghị naanị kpoo aka gị ọkụ, dịkwa jụụ!
Lambmụ nwoke na atụrụ / atụrụ akpụkpọ anụ ajị anụ ejiri aka mee aka
Ndị ọrụ aka a bụ ndị ndị ọrụ aka nwere ihe karịrị afọ 10 maka ahụrụ aka akpụkpọ anụ. Kpochapụwo ihe ọtụtụ afọ, ma ga-aga n'ihu. Nke ahụ bụ maka ọrụ, mgbede, ma ọ bụ iyi kwa ụbọchị. Ejiji dị mma maka oge oyi. Aka gị ga-ekpo ọkụ ma dịkwa mma na ajị anụ na ajị anụ, na-enwe mmetụta dị mma iji eyi dịka ha dị, ngwakọta zuru oke! dị jụụ!
Lambmụ nwoke na-akpụ akpụ akpụkpọ anụ ajị ajị agba n'aka oyi na aka
Ndị ọrụ aka a bụ ndị aka ọrụ nwere ihe karịrị afọ 10. Nlekọta oge ochie maka ọtụtụ afọ, ọ ga-aga n'ihu. Nke ahụ bụ maka ọrụ, mgbede, ma ọ bụ iyi kwa ụbọchị. Ejiji dị mma maka oge oyi. Aka gị ga-ekpo ọkụ ma dịkwa mma na ajị anụ na ajị anụ, na-enwe mmetụta dị mma iji eyi dịka ha dị, ngwakọta zuru oke! dị jụụ!
Lambmụ nwoke na atụrụ / atụrụ suede akpụkpọ anụ ajị anụ na-ejikọ oyi
Ejiri akpụkpọ anụ atụrụ nke Etiopia azụ na nkwụ deerskin, Deerskin siri ike ma dịgide, ezigbo ikuku ikuku, nwere ike iji aka gị na-eku ume. Nchikota nke abuo, na ejiji ohuru, ihe kachasi elu. zuru okè Nchikota! Ọbụghị naanị kpoo aka gị ọkụ, dịkwa jụụ!
Mere nke atụrụ Ethiopia akpụkpọ anụ, na ajị anụ, The kpochapụwo styling na kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ fọrọ nke nta ọ bụla oge, si ukporo ka uwe. zuru okè Nchikota nke kasị mma ihe, ọhụrụ ejiji na ike ịrụ ọrụ. Kacha mma otu uwe n'oge oyi.
Lambmụ nwoke atụrụ / atụrụ akpụkpọ anụ ajị anụ ejiri aka na-ekpuchi oyi na akpụkpọ anụ
Mere nke atụrụ Ethiopia akpụkpọ anụ PALM na Wool Knitted Fabric Series, Nchikota nke abụọ, na ọhụrụ ejiji, ike ịrụ nkà. Dị fechaa, nkasi obi, na ịma mma, zuru okè Nchikota! Ọ bụghị naanị na-ekpo ọkụ, dịkwa nnọọ mma!